E nwere iche ụzọ ndabere listi ọkpụkpọ, ngwa ọdịnala, ozi, kọntaktị gị iPhone ka iTunes Ọbá akwụkwọ na-agụnye maka nchebe Idebe. Mgbe ị na-ikwunye na gị iPhone gị na kọmputa na ẹkedori iTunes, ị nwere ike n'otu ntabi-ele nhọrọ ndabere gị data na kọmputa gị ma ọ bụ iji iCloud.
Otú ọ dị, mgbe ị na-agbalị ndabere gị iPhone ka iTunes na iCloud, ị pụrụ ịhụ na-anya ozi na gị iPhone-apụghị kwadoo ruru ka otu n'ime ndị a mere:
Part 1. iPhone ndabere site iTunes nchọpụta nsogbu Part 2. iPhone ndabere site iCloud nchọpụta nsogbu
Part 1. iPhone ndabere site iTunes nchọpụta nsogbu
N'okpuru bụ ụfọdụ nsogbu ndị ị pụrụ izute mgbe ị ndabere iPhone ka iTunes:
• The ndabere nnọkọ okpu
• A nnọkọ-apụghị malitere
• The iPhone jụrụ arịrịọ
• Otu njehie mere
• Otu amaghị njehie mere
• The ndabere apụghị-azọpụta na nke a na kọmputa
• Ọ bụghị ezuru free ohere dị
Ọ bụrụ na ị na-ahụ otu n'ime ndị a ozi ma ọ bụ a dị iche iche ozi, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na iTunes maka Windows akwụsị-aza ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara mgbe okokụre, na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
1). Paswọọdụ Ị kpọghee ekwt gị iPhone ndabere faịlụ:
I nwere ike ime na site na-eweghachiri gị iPhone dị ka a ọhụrụ ekwentị. Ị ga-ndammana ida niile nke gị ọdịnaya, ma i nwere ike weghachi ọtụtụ n'ime ya ma ọ bụrụ na ị nwere mgbe ndabere gị iPhone. Ọ bụrụ na ọ bụ ndị na-ekwe omume iji mee ka onye unencrypted ndabere mgbe ị kere ihe ezoro ezo otu, onye ọ bụla stoles gị iPhone pụrụ nanị ime ka onye na unencrypted ndabere gị passcode ekpochi iPhone ma na-ele niile nke gị data.
2). Lelee gị nche ntọala
Ị nwere ike mkpa imelite, hazi, gbanyụọ, ma ọ bụ iwepụ gị nche software.
3). Ndabere ma ọ bụ weghachi site na iji ọhụrụ nchịkwa akaụntụ:
Mepụta ọhụrụ nchịkwa akaụntụ na kọmputa gị na-eji ya na-eme ka a ndabere. Eso ndị a n'ihi na Mac OS X ma ọ bụ ndị a na Microsoft website maka Windows. Ọ bụrụ na ị nwere ike ndabere site na iji ọhụrụ nchịkwa akaụntụ, abanye na-eji mbụ ọrụ na akaụntụ na eso ndị a:
Nzọụkwụ 1. Jide n'aka na akaụntụ bụ ihe nchịkwa.
Nzọụkwụ 2. Lelee ikikere maka directories ebe iTunes-ede ndabere.
Nzọụkwụ 3. nyegharịa Backups nchekwa.
Nzọụkwụ 4. Open iTunes na-agbalị ndabere ọzọ. Detuo gị ndabere n'ihu na-eji iTunes Mmasị> Devices ka ihichapụ gị ndabere.
4). Tọgharịa Lockdown nchekwa:
Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara mmekọrịta, ndabere, ma ọ bụ weghachi gị iPhone, i nwere ike a na-ezi iji tọgharịa Lockdown nchekwa gị Mac ma ọ bụ Windows.
Nzọụkwụ 1. Site Finder, họrọ Go> Gaa nchekwa.
Nzọụkwụ 2. Ụdị / var / dB / lockdown na pịa Return.
Nzọụkwụ 3. Họrọ View> dị ka Oyiyi. The Finder window kwesịrị igosi otu ma ọ bụ karịa faịlụ na alphanumeric faịlụ aha.
Nzọụkwụ 4. Na Finder, họrọ Dezie> Họrọ niile.
Nzọụkwụ 5. Họrọ File> Kwafee Mkpofu. Ị nwere ike mkpa ịbanye onye nchịkwa paswọọdụ.
Rịba ama: Hichapụ faịlụ na Lockdown nchekwa; adịghị ihichapụ Lockdown nchekwa.
Nzọụkwụ 1. Pịa etokwa iko.
Nzọụkwụ 2. Ụdị ProgramData na pịa Return.
Nzọụkwụ 3. Kpagide Apple nchekwa.
Nzọụkwụ 4. Right-pịa Lockdown na nchekwa ma họrọ Hichapụ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ Malite, pịnye ProgramData na search mmanya, na pịa Return.
Nzọụkwụ 2. Kpagide Apple nchekwa.
Nzọụkwụ 3. Right-pịa Lockdown na nchekwa ma họrọ Hichapụ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ Malite> Run.
Nzọụkwụ 2. Ụdị ProgramData na pịa ru n.
5). iTunes apụghị ndabere iPhone "iPhone aha" n'ihi na nkwado ndabere na mpaghara bụ ihe rụrụ arụ ma ọ bụ na dakọtara na iPhone:
Nke a bụ ihe ngwọta maka Windows (7), nke na-adịghị emetụta na OP, ma nsogbu ya yiri ka e edozi ama mgbe ọ bụla ọnụego.
Nzọụkwụ 2. Jide n'aka gị Explorer egosiputa zoro ezo faịlụ.
Nzọụkwụ 3. Gaa C: \_ Ọrụ \_ aha njirimara \_ AppData \_ agagharị \_ Apple Computers \_ MobileSync \_ ndabere
Nzọụkwụ 4. Hichapụ ihe nile e nwere (ma ọ bụ ịkpali ya ebe ọzọ, na-na-adịghị ize ndụ n'akụkụ)
Nzọụkwụ 5. Ma mere. M ikpe, m na-ehichapụ abụọ nchekwa na-anya, cryptic, alphanumeric aha, otu efu, ndị ọzọ n'elu 1GB na size. Mgbe m meghere iTunes ọzọ, m nwere ike ịmepụta ohuru ndabere enweghị ihe ọ bụla njehie.
6). iTunes apụghị ndabere iPhone n'ihi na nkwado ndabere na mpaghara apụghị-azọpụta.
Nzọụkwụ 1. Navigate ka C: \_ Ọrụ \_ aha njirimara \_ AppData \_ agagharị \_ Apple Computer \_ MobileSync.
Nzọụkwụ 2. Right pịa ndabere na nchekwa ma họrọ Properties.
Nzọụkwụ 3. Họrọ Security taabụ
Nzọụkwụ 4. Pịa Dezie bọtịnụ na mata Onye ọ bụla.
Nzọụkwụ 5. Lelee Full akara checkbox na iti Mee na mgbe ahụ OK.
Nzọụkwụ 6. Click OK ọzọ
Part 2. iPhone ndabere ka iCloud nchọpụta nsogbu
Ga-amasị ndabere iPhone site iCloud? Na-esonụ akụkụ, m depụta si ụfọdụ nchọpụta nsogbu. Ọ bụrụ na ị na-eme nwere otu nsogbu, atụ anya na ọ pụrụ inyere gị aka.
1). Gịnị mere e ji iCloud bụghị akwado nile nke m kọntaktị?
iCloud yiri ka a ga-arụ ọrụ ezi, ma e wezụga na ọ bụghị akwado niile m na kọntaktị, naanị a ele mmadụ anya n'ihu ndepụta.
Ọ bụrụ na-adịbeghị anya mgbanwe Ndi ana-akpo na gị iPhone adịghị egosi na gị na ngwaọrụ ndị ọzọ, na ị na-syncing kọntaktị na otutu ihe ndekọ na gị iPhone (iCloud, Gmail, Yahoo), jide n'aka na iCloud bụ ndabere gị na akaụntụ maka Ndi ana-akpo:
Mgbata Ntọala> Mail, Ndi ana-akpo na kalenda. Na Ndi ana-akpo ngalaba, mgbata Ndi an-kpọ Akaụntụ, mgbe ahụ enweta iCloud.
Ọ bụrụ na ị na-eji iOS 7, ịkwụsị na Malitegharịa ekwentị ahụ Ndi ana-akpo ngwa gị iPhone:
Nzọụkwụ 1. Pịa Home button ugboro abụọ ịhụ preview meziri nke ngwa ị nwere oghe.
Nzọụkwụ 2. Chọta Ndi ana-akpo preview ihuenyo na swipe ya elu na nke preview ịkwụsị ngwa.
Nzọụkwụ 3. Kpatụ Home bọtịnụ laghachi gị Home ihuenyo.
Nzọụkwụ 4. Chere a nkeji tupu reopening Ndi ana-akpo ngwa.
Tụgharịa iCloud Ndi ana-akpo anya na azụ on:
Nzọụkwụ 5. Kpatụ Ntọala> iCloud.
Nzọụkwụ 6. Turn Ndi ana-akpo apụ. Họrọ ka ihichapụ data naanị ma ọ bụrụ gị data dị adị na icloud.com/contacts na otu ma ọ bụ karịa n'ime ihe gị na ngwaọrụ. Ma ọ bụghị, họrọ Nọgidenụ Data.
Nzọụkwụ 7. Chere a nkeji ole na ole tupu mbịne Ndi ana-akpo azụ.
Nzọụkwụ 8. Malitegharịa ekwentị gị na iPhone site na-ejide ala Ụra / Tetanụ bọtịnụ ma swiping ihuenyo mgbe kpaliri ike anya. Mgbe ahụ-atụgharị gị iPhone azụ. Nke a nwere ike ụda dị mfe, ma ọ dịghị reinitialize netwọk gị na ngwa ntọala na ike ugboro ugboro dozie okwu.
2). iCloud ndabere ozi ga na alaghị & gbachiri ihuenyo
Jide Ụra (On / Off) & Home button ala (ọnụ) ihe 10-12 sekọnd.
Jide ma n'elu buttons ruo mgbe ị na-ahụ Apple Logo (malitegharia), (dị nnọọ mkpa)
Ozugbo Logo ogosiri ka ọ laa nke buttons. Chere 1-2 nkeji maka software na n'ụlọ ihuenyo Ibu Ibu elu.
3). M nwere ọhụrụ iPhone wee iji weghachi si iCloud ma ọ na-ekwu na e nweghị ndabere dị megide m nbanye:
Ọ bụrụ na ị na-eji iCloud, ọ nwere ike na-akpaghị aka ndabere gị data dị ka ogologo oge ị na họọrọ a nhọrọ. Ị nwere ike nyochaa njirimara gị iCloud ndabere na-eme ka n'aka na ọ bụ ruo ụbọchị site na isoro ndị a:
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere.
Nzọụkwụ 2. Gbanwuo iCloud ndabere ma ọ bụrụ na ọ bụ anya.
Nzọụkwụ 3. Kpatụ Back Up Ugbu a. Ọ bụrụ na ị nwere ọhụrụ iPhone, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị mkpa iji weghachi gị iPhone iji dozie esemokwu, na-eso nzọụkwụ ndị a.
Nzọụkwụ 4. Soro nzọụkwụ ndị mbụ na iOS Mbido nnyemaaka (họrọ asụsụ gị, na na na).
Nzọụkwụ 5. Họrọ Weghachi si iCloud ndabere mgbe nnyemaaka-ajụ gị melite gị iPhone (ma ọ bụ ndị ọzọ iOS ngwaọrụ).
Nzọụkwụ 6. Họrọ ndabere gị kere mbụ. Ị nwere ike iweghachi a ndabere naanị site na iji iOS Mbido nnyemaaka.
Ọ bụrụ na ị na-ama melite gị iPhone, ị nwere ike ihichapu niile ugbu a ọdịnaya-aga site iOS Mbido nnyemaaka ọzọ. Mgbata Ntọala> General> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Mwube. Ime nke a nanị ma ọ bụrụ na ị na-ama nwere ndabere, n'ihi na nke a nzọụkwụ ga-ewepụ ihe niile ugbu a ọdịnaya site na gị iPhone.
4). Olee otú m weghachi site na iCloud ndabere ọ bụrụ na m iPhone na-ama melite maka ojiji?
Nzọụkwụ 1. Ị ga-mkpa ihichapu niile data na ntọala si na gị iPhone. Akpa, jide n'aka na i nwere iCloud ndabere iji weghachi:
Nzọụkwụ 2. Gaa Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere> Jikwaa Nchekwa. Mgbe ahụ enweta aha gị iPhone ele a ndepụta nke iCloud azụ faịlụ.
Nzọụkwụ 3. Lelee ụbọchị nke ndabere na ị chọrọ iji weghachi, n'ihi na i nwere ike na weghachi iPhone ihe iCloud ka kwadoo on na ụbọchị.
Nzọụkwụ 4. Mgbe ị na-egosi na ihe iCloud ndabere dị, jikọọ gị iPhone ka a ike isi iyi na-eme ka n'aka na ọ bụ jikọọ na Ịntanetị site na Wi-Fi.
Nzọụkwụ 5. Soro ntuziaka maka iweghachi gị iOS ngwaọrụ site na iCloud ndabere, nke na-agụnye-eme n'aka na gị iPhone a na-eji ọhụrụ version nke iOS.
5). Olee otú m nwere nyochaa na-eweghachite nke iCloud bụ underway?
Gaa Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere. Mgbe weghachi usoro bụ underway, na iCloud ndabere ọnọdụ bụ dimmed na ị nwere nhọrọ enweta Kwụsị Iweghachi.
Atụmatụ na usoro on iPhone Update
Update iPhone na na-enweghị iPhone
Atụmatụ na usoro on iPhone Iweghachi
Weghachi iPhone si iCloud / iTunes ndabere
Jailbreak iPhone 4S na Evasi0n 7
Top 10 Alternatives ka iTunes
Nyefee Music si iPhone ka iTunes
Nyefee Photos si iPhone ka Computer
The Best iPhone Nyefee Ngwá Ọrụ maka Ị
Hichapụ ihe niile si iPhone
Free iPhone ndabere extractor: Wepụ iPhone Ndabere maka Free
Otú nyefee SMS si iPhone ka Moto X
Best Desktọpụ iPhone File Nyefee maka Windows / Mac
> Resource> iPhone> 11 Kasị-jụrụ ajụjụ banyere iPhone ndabere na iTunes / iCloud